Sociic -Iinkonzo zeNtengiso yezeNtlalontle
Ukuthandwa kweNgxelo ye-YouTube [UPVOTES]
Amagqabantshintshi e-YouTube Comment [IZIKHUMBUZO]
Twitch Ukujongwa kwesitishi
Abalandeli beTikTok (Abalandeli)
Akukho mveliso kwinqwelo!
Nceda wenze ukhetho lwakho.
Sociic yinkonzo yokuthengisa yentengiso eendaba yoluntu enikezela inkampani ngabasebenzi abanezakhono kunye neengcali ezinokukunceda ukhulise ishishini lakho, inqanaba lentlalontle kunye nesazisi kwi-intanethi.
Mon-Fri 9 kusasa ngo-6pm
# 1 Indawo yentengiso yeeNkonzo zeMidiya yoLuntu
Khulisa ukufikelela kwakho kwiNtlalo ngoku
Thenga Abalandeli be-Instagram yokwenyani, ukuthandwa, ukuJongwa kweVidiyo, iiNkcazo ngexabiso eliphantsi
Thenga iiVenkile zenyani ze-YouTube, ukuthandwa, ababhalisi, iikhomenti, Izabelo ngexabiso eliphantsi
Thenga okwenyani Twitch Abalandeli, ukuJongwa kwesitishi, ukuBonwa ngokuBukhoma, Ababhalisi kumaxabiso aphantsi
Sikunika iinkonzo ezikhawulezayo zeNtlalo kwintengiso. Zonke ii-odolo ezihlawulelweyo zenziwa kungaphantsi komzuzu xa sele iqinisekisiwe ngumsebenzi.
IQela leNkxaso elizinikeleyo
Abasebenzi bethu abazinikeleyo basoloko befumaneka. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo malunga neenkonzo zethu okanye amava akho naziphi na iingxaki kwiodolo yakho, nceda ungathandabuzi ukunxibelelana nathi.
Ukhuseleko luza kuqala kwiNqindi
Asidingi kuqinisekiswa kweakhawunti yakho. Ke, kukhuselekile kwaye akukho thuba lokuba iakhawunti igqekeziwe kwaye ivalwe
Abantu abalikhethi ixesha lokutyala imali kwinto ejongeka ngathi yeyakudala. Ngokuchasene noko, xa bebona abanye ubulungu bethatha inxaxheba kuthungelwano lwezeNtlalontle, kubenza bathathe isigqibo esomeleleyo malunga notyalomali ngaphandle kokucinga okwesibini. Iindaba ezimnandi zezokuba zisongela ixesha, zibiza indleko kwaye zisebenza njengekhubalo. Kwaye kulapho singena khona, sikubonelela ngeqonga elinokukunceda ukonyuse amazinga akho oLuntu ngaphandle kwexesha.
Uphando lweedemonstraverunt lectores legere.
Sifuna ukushiya umbono ongapheliyo kubaxhasi bethu. Ukuba awonelisekanga ngumgangatho okanye ukuhanjiswa kwe-odolo yakho, sixelele. Siza kuzama ukuyihlela ngokukhawuleza!
Sinikezela ngamaxabiso asezantsi kumnatha. Siya kwinqanaba elingaphezulu kwaye sichaza ukuba ukuba unokufumana nayiphi na inkampani ebhalisiweyo kwaye ibanga inkonzo ebhetele, siya kulibetha ixabiso abalinikelayo.
INKONZO ZEYURE ezingama-24
Abaxhasi abonwabileyo ngathi
umfanekiso / svg + xml
Le ndawo indincedile ndafumana abalandeli abaninzi kwaye inkxaso iyamangalisa
Indawo emangazayo yoku-odola iinkonzo zentlalo-ntle ngoku iodole i-10000 twitch Ababhalisi bajika ixesha kwakunzima
Sociic yinkonzo yokuthengisa yentengiso eendaba yoluntu enikezela inkampani ngabasebenzi abanezakhono kunye neengcali ezinokukunceda ukhulise ishishini lakho, inqanaba lentlalontle kunye nesazisi kwi-intanethi. Inkampani yethu ibonelela ngeenkonzo ezifikelelekayo kunye nezoqoqosho. Iinkonzo ziyaguquguquka kwaye iziphumo zinokubonwa ngokukhawuleza xa kuthelekiswa nabanye ababoneleli ngeenkonzo. Sigqithile kwinkampani ezinzileyo kunye nabathengi abadumileyo.
Ilungelo lokushicilela © 2018 - 2021 | Sociic